Home Wararka Lafta Gareen iyo Waare oo si yaab leh u dacweeyay Farmaajo, Maxaa...
Lafta Gareen iyo Waare oo si yaab leh u dacweeyay Farmaajo, Maxaa is badalay?
Asbuucii la soo dhaafay ayaa beesha caalamka oo uu hogaaminayay Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay Mudane James Swan waxa ay booqasho kala duwan ku kala bixiyeen magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo halkaas oo ay kula kulmeeen Madaxeeynayaasha labada dowlad goboleed.
Kulanka ayaa ahaa mid beesha caalamka ay ku doonaysay in ku ogaadaan fakarka labada maamul ee la xiriira arimaha doorashada.
MW Cabdicasis Laftagareen oo ay ku horeeyeen wafdigu ayaa kulan waxa uu u soo kaxeeystay hal Wasiir oo kali ah si fartiinta uu u sheegaya beesha caalamka ayan u bixin. Mid ka mida wafdiga beesha caalamka oo la hadlay MOL ayaa sheegay in Cabdicasis Lagtagareen uu si cad u sheegay in qaabka doorashada uu damacsan yahay MW Farmaajo tahay mid uu doonayo in uu ku boobo doorashada.
Laftagareen ayaa u sheegay beesha caalamka in dad lagu soo xireeyay degmooyinka gobolka Banadir ayan was dooran karin. Waxa uuna uga digay in beesha caalamka ay marnaba ka ogolaan Farmaajo qorshaha uu doonayo in uu dalka ku galiyo dagaal sokeeyo.
Laftagareen ayaa si dacwad u sheegay hadii ay ogolaadaan qorshaha Farmaajo in ayaga mas’uuliyada qaadi doonaan dhibka ka dhasho qorshaha Farmaajo.
Dhanka kale MW Waare oo ay wafdigu u tageen maalintii labaad ayaanba qaraanin fakarkiisa, iyada oo qoraal af Somali iyo English ku Qoran ayuu a u dhiibay wafdiga waxaa uuna ka digay in Farmaajo dalka aan lagu sii daynin.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay, talaabooyinka ay qadeen labada madaxweyne ayaa ahaa kuwo horay loo soo abaabulay isku fakarna lagu gudbinayay. Waxa la rumaysan yahay in Xasan Kheyre ka danbeeyay qorshaha Lagula dagaalayo Farmaajo iyo fakarkiisa.